အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖော်ဖြစ်သော Logitech Litra Glow light အသစ် ငါ mac ကပါ။
အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖော်ဖြစ်သော Logitech Litra Glow light အသစ်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် သို့မဟုတ် Mac တစ်ခုရှေ့တွင် အကြောင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးဖန်တီးသည့်အခါတွင် အလင်းရောင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Logitech သည် ၎င်း၏ Litra Glow အလင်းကို ယခုမှထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။. အကြောင်းအရာဖန်တီးရန် မည်သည့်တပ်ဆင်မှုကိုမဆို အလင်းရောင်ပေးရန်အတွက် အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ကုမ္ပဏီ Logitech သည် YouTube တွင် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သော၊ streaming တွင် မည်သည့်အကြောင်းအရာကို ဖန်တီးသည် စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသူများအတွက် အထူးဖန်တီးထားသော အလင်းရောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဤ Litra Glow အသစ်သည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Logitech StreamCam အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖော်ငါတို့မြင်ပြီးသား ကင်မရာ ကျွန်ုပ်သည် Mac မှဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ #todoApple ပေါ့တ်ကာစ်ပြုလုပ်ရန် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါသည်။
သင့်တွင် ဤမီးအမျိုးအစားနှင့် ဆင်တူသည့် အလင်းရောင်အချို့ရှိနေပြီဖြစ်နိုင်သော်လည်း Logitech Litra Glow အသစ်မှ ပေးဆောင်သည့် ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားသည် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ ၎င်းကို တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ကာ အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ "ကောင်း၊ ကောင်း၊ စျေးပေါ" ဟု အများအားဖြင့် အခေါ်အဝေါ်ပြောလေ့ရှိသော B သုံးခုအနက်မှ ထပ်ထည့်နိုင်လျှင် ဤနေရာတွင်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤအလင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စျေးကွက်တွင် ရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်ခွင့်များသည် စျေးနှုန်းအတန်ငယ် ပိုမိုစျေးကြီးပြီး၊ ဤ Litra Glow မှပေးဆောင်သောကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များ။
1 ဤ Logitech Litra Glow အသစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အတိုင်းအတာ
1.0.1 မော်နီတာတပ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့မှုအပြည့်
1.0.2 မော်နီတာ mount မပါဘဲ
2 ဤ Logitech အလင်းရောင်အသစ်မှပေးဆောင်သောအလင်းရောင်အရည်အသွေး
3 ဤအလင်းအသစ်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုသနည်း။
4 Litra Glow ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
ဤ Logitech Litra Glow အသစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အတိုင်းအတာ
အလင်း၏ ဒီဇိုင်းကို အာရုံစိုက်သောအခါ အချို့သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ပလတ်စတစ်အချောထည်များသာမက အရည်အသွေးညံ့သောအတွက် မဟုတ်ပါ။. Logitech သည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များစွာအတွက် ဤပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး တာရှည်ခံမှုနှင့် အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်ပါသည်။
အလင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏အပေါ်ဘက်တွင် အပြည့်အဝပံ့ပိုးပြီး ကောင်းစွာဖိထားရန် ထိပ်တွင်တက်ဘ်တစ်ခုရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်း အသေးစိတ်ကျဖို့ အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် Logitech ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သင်ပြောပြနိုင်ပါသည်။
အလင်းရောင် ၎င်းသည် အရွယ်အစားအားဖြင့် အလွန်ကြီးသည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အလင်းရောင်အရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှတဆင့်နှင့် အလင်း၏နောက်ဘက်ရှိ ခလုတ်များနှင့်အတူ အသုံးပြုသူအတွက် စကားပြောကို အပြည့်အဝ စီစဉ်ထားပါသည်။
ဒီဇိုင်းသည် အလွန်သတိထားရပြီး ၎င်းသည် စတုရန်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူလိုအပ်သည့်အတိုင်း ပြောင်းလဲနိုင်သောအတိုင်းအတာရှိသည်။ ၎င်းသည် အလင်း၏ အောက်ပိုင်းမှ ပေးဆောင်သော မော်ဂျူလာကြောင့်၊ အမြင့်လိုအပ်ချက်အရ ဆန့်သည် သို့မဟုတ် ကျုံ့သည်။ အလင်းနှင့်ပင် ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ဤအရာများသည် ၎င်းတို့၏ တိုင်းတာချက်များဖြစ်သည်။
အနက် ၃၄၅ မီလီမီတာ
အလေးချိန် - ၉၈၀ ဂရမ်
မော်နီတာ mount မပါဘဲ
အနက် ၃၁၆ မီလီမီတာ
အလေးချိန်: 99 ဂရမ်
1,5m USB-C မှ USB-A ကြိုး
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Litra Glow သည် မည်သည့် desktop သို့မဟုတ် laptop အတွက်မဆို အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်ပေးဆောင်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Logitech TrueSoft နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်ဆန်းသစ်သော အနားသတ်မရှိသော diffuser ပါ၀င်သော Litra Glow သည် သင့်အကြောင်းအရာကို သိမ်မွေ့ပြီး ချော့မော့သောအလင်းရောင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးကာ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ YouTube ဗီဒီယိုများအတွက်၊ Twitch တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများအတွက်ဖြစ်စေ Litra Glow သည် သင့်အား အမြဲနှစ်သက်သည်။
ဤ Logitech အလင်းရောင်အသစ်မှပေးဆောင်သောအလင်းရောင်အရည်အသွေး
ကင်မရာရှေ့တွင် သင့်အား အကောင်းဆုံးကြည့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသားအရောင်၏ သဘာဝက အရေးကြီးပါသည်။ Logitech တွင် TrueSoft ဟုခေါ်သော စနစ်တစ်ခုရှိသည်။ သင့်မျက်နှာကို လုံးဝတိကျစွာ တောက်ပစေရန်အတွက် အထူးဖန်တီးထားသောကြောင့် သင့်အကြောင်းအရာသည် သင့်အား သစ္စာရှိစွာ ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အကောင်းဆုံးအရောင်ဖော်ပြမှုအညွှန်း (CRI) ဖြင့် TrueSoft သည် ကင်မရာပေါ်ရှိ ပြီးပြည့်စုံသော ရုပ်ရှင်အရည်အသွေး အလင်းရောင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
အရောင်အပူချိန်အကွာအဝေးသည် 2700K မှ 6500K (Kelvin) အကြားတွင် အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိမှုသည် 250 lumens ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် စားပွဲပေါ်မှာ။ ၎င်းတွင် အရောင်ဖော်ညွှန်းကိန်း 93 CRI (လွတ်လပ်သော Logitech လေ့လာမှု၊ ဧပြီလ 2021) နှင့် ၎င်း၏ တိုင်းတာခြင်း။ Diffuser သည် ဘောင်မပါဘဲ သီးသန့်ဖြစ်သောကြောင့် ရှေ့တွင် လုံးဝအဖြူရောင်ပေါ်နေပါသည်။
ငါတို့ပြောနိုင်တယ် ဤ Logitech မှကမ်းလှမ်းသောအလင်းဆက်တင်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့ကြောင့် နေ့အချိန်၊ ပြင်ပအလင်းရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးရှင်ဗီဒီယိုများတွင် စီမံခန့်ခွဲရန် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ဤရှုထောင့်အပေါ် မူတည်၍ အလင်းကို ပြင်ပအလင်းရောင်နှင့် အခြားအကြောင်းအချက်များပေါ်မူတည်၍ အလင်းအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရာတွင် ပြဿနာရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အသံကဲ့သို့ပင်၊ အလင်းသည် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ဖန်တီးရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အခြားရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ Litra Glow အသစ်ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက် အလင်းရှုထောင့်သည် လုံးဝဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤအလင်းအသစ်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုသနည်း။
Logitech light အသစ်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုသူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဆိုရင် အနောက်ဘက်မှာ USB C Port တစ်ခုတွေ့တယ်။ ၎င်းသည် လက်ရှိစက်ပစ္စည်းအများစုနှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အလင်းကိုယ်တိုင်က 1,5m ရှည်သော USB C ကို USB A ကြိုးသို့ ပေါင်းထည့်ထားသောကြောင့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ အလင်းသည် နံရံချိတ်ဆက်ကိရိယာကို မထည့်ထားသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းကိရိယာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ USB ပေါက်ကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အလင်းချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ကျောရှိ ဗဟိုပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်ရမည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမတော့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ၎င်းနောက်ကျောတွင် ထည့်ထားသည့် ခလုတ်များမှတစ်ဆင့် အလင်းကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပါ။ပိုလွယ်ပြီး ပိုမြန်တယ်။ ဘေးနှစ်ဖက်တွင် အလင်း၏ တောက်ပမှုနှင့် ပြင်းထန်မှုအား အလင်း၏ လေသံကို ပြောင်းလဲပေးသည့် အခြားဘေးခလုတ်တစ်ခုနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသည့်အတိုင်း အဝါရောင် အဖြူရောင်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမှတ်အသား LED မီး၏ lumens နှင့်အတူ တောက်ပမှုနှင့် ပြင်းထန်မှုကို ချိန်ညှိခြင်းသည် လေညင်းဖြစ်သည်။
Litra Glow ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
လောလောဆယ်တွင် Logitech Litra Glow အသစ်ကို ချက်ချင်းရောင်းချရန် မရရှိနိုင်သေးပါ၊ ၎င်း၏စျေးနှုန်းချိုသာပြီး အင်္ဂါရပ်များအရည်အသွေးသည် ဖန်တီးသူများမှ အလွန်ရှာဖွေထားသော အလင်းရောင်တစ်ခုဖြစ်လာစေသောကြောင့် ၎င်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကြိုတင်စာရင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဆိုရင် Logitech Litra Glow အသစ်၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ယူရို ၆၉ ဖြစ်သည်။
mount သည် လုံခြုံသော်လည်း အချို့သော Mac များ၏ပါးလွှာမှုအတွက် အနည်းငယ်ကြီးမားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖော်ဖြစ်သော Logitech Litra Glow light အသစ်